Ka hor intaan Soul laga arki karin, waa in laysku waafajiyo gudaheeda, indhahana jidhka waa la indho la'yahay dhammaan illo-wareed.
Dunida, Disciple, waa Hall of Deck, taas oo lagu dejiyey Jidka Socdaalka culus, dabinka si aad u dhuumato Your Ego by dhaleeceynta loo yaqaan "Heredy Great (Separeteness)")
- Codka Silence.
Vol. 1 FEBRUARY, 1905. No. 5
Naftu waa xajin daa'im ah, laga bilaabo waagii hore, iyo wixii ka baxsan, mustaqbalka mustaqbalka. Miyirka ugu sarreeya naftiisu waa joogto, isbedel la'aan, weligeed ah.
Doonaya in ay ninkeeda ku xirto domigeeda, dabeecadda ayaa bixisay martiqaasheeda meydka ah oo badan oo kala duwan oo ay u jilicsanayd isku dhaf ah hal jidh. Waa iyada oo jidhkani dabiiciga ah uu awood u leeyahay inuu tuuro niyadjabkiisa nafta iyo inuu fahmo fahamka. Dareenka ayaa ah xeeladaha cajiibka ah ee dabiiciga ah.
Glamor waa khanka magiciisa ee dabiiciga ah ee ku saabsan nafta. Glamor wuxuu keenaa jilbaaxo faro badan oo jilicsan si uu u soo jiido, uhadal jilicsan ee heesaha si uu u jilciyo, neefka udgoon ee cadarka udheerka ah, wuxuu keenaa raaxo macaan oo u roonaanta cuntada oo dhiirigelisa dhadhanka, iyo taabashada taabashada jilicsan ee bilaaba dhiigga xinjirta jirka oo miyir qabka.
Sidee dabiici ahaan nafta loo qoondeeyay. Sidee si sahlan loo dareemaa. Sidee si qarsoodi ah loola jeeda. Sidee u fududahay websaydh aan macquul ahayn ee ku saabsan ku saabsan. Dabeecadda ayaa si fiican u ogyahay sida loo xajiyo martida. Marka mid ka mid ah caruurtu ay joojiyaan in la isticmaalo, qof kale ayaa si hufan u soo jeediyay kaas oo naftu u horseeday in ay si qotodheer u noqoto meshes nolosha. Waxay sii socotaa in la istacmaali karo, la qabsado oo ku soo dhawaato isbeddel joogto ah, oo illoobo sharafta iyo awooda joogitaankeeda iyo sida fudud ee ay u noqon karto.
Inta lagu jiro xabsiga jidhka naftiisu si tartiib tartiib ah ayay u soo toosaan miyirka naftiisa. In la ogaado in ay ku hoos jirtay hannaanka majaajilada, iyada oo qadarinaysa awooda gacanta iyo fahamka naqshadeeda iyo qaabkeeda, nafta ayaa loo oggol yahay inay ka hortagto oo ay carqaladeeyaan qalabkeeda. Waxay isku walaaqdo oo waxay noqotaa mid difaacaysa sixirka dabka.
Qofka maskaxda leh ee jajabinaya jilitaanka majaajiladu waa xaqiiqda ah in meel kasta oo ama xaalad kastaaba ay tahay, Waa joogto, isbedel la'aan, aan dhimanayn, markaa waa in aan la xirnayn, la dhaawici karin, ama la burburin karo.
Farxadda wareegga taabashada waa dareen. Waa kan ugu horreeya iyo kan ugu dambeeya kaas oo laga rabo in laga adkaado. Waxay u keentaa nafta oo hoos u dhiga dhammaan dareemayaasha. Furitaanada taas oo dabiiciga ah u shaqeeyaa maqaarka iyo dhammaan xubnaha jirka. Dareenkani waxa uu leeyahay xididada si qoto dheer u fadhiya qarsoodiga jinsiga. In mucjisada cajiibka ah ee Laocoon, Phidias waxay muujisay nafta jahwareerka ku jirta xayawaanka abeesada kaas oo lagu soo tuuray qorraxda garabka. Adigoo fiirinaya taliyuhu, abeesadu wax bay tartaa.
Mid ka mid ah hababka loo yaqaan 'entrostraves' ayaa ah carrabka, dhirta iyo raashinka jidhka, oo hoos yimaada hargabka dhadhanka. Adigoo eegaya maskaxda naftu waxay jidhka ka dhigaysaa in uu ka difaaco suntida dhadhanka, waxayna u ogolaataa waxa kaliya ee jirku ku jiri karo caafimaadkiisa iyo inuu ku filnaado baahidiisa. Qandhada dhadhanka ayaa markaa lumisa xajistiisa, jidhkuna waxa uu helayaa nafaqadaas oo dhadhanka dhadhankiisu sahaydahay.
Isticmaalka suugaanta urka dabiiciga ah wuxuu waxyeello u geystaa nudaha urka, sidaas darteed maskaxda ayaa maskaxda ku haysa si loogu oggolaado dareenada kale inay xado maskaxda. Laakiin iyada oo la eegayo taliyuhu waxa saameyn ku leh qaansiirka waa la jebiyey, halkii uu ka ahaan lahaa nin ay saameeyeen dabeecadda dabiiciga ah, neefta nolosha ayaa la qaadaa.
Gacmaha oo dhan waxaa loo saameeyaa dareenka codka. Marka dabeecadu isdaba mariso nacasku waa jilicsanaa oo la daboolaa ilaa taliyaha la arko. Markaa muusigga adduunka ayaa lumiyay jilitaankiisa. Marka ay nafta maqlayso wada-noolaanshaha miyir-beelka oo dhan, dhammaan dhawaaqa kale wuxuu noqonayaa buuq iyo dabeecaddan gaaban ee dabiiciga ah weligeed jebin.
Indhaha indhuhu dabeecad ayaa ku garaacaya iyada oo la taabanayo isfahamkeeda. Hase yeeshee, aragti joogta ah ee talismanka ah ayaa ciribtirma, midabka iyo qaababkuna wuxuu noqdaa mid asal ah oo ku saabsan maskaxda qofka naftiisa u muuqato. Marka naftu u aragto muuqaalkeeda wajiga iyo dabeecadaha dabiiciga ah waxay ka fikireysaa quruxda dhabta ah waxayna ku dhiirigelinaysaa xoog cusub.
Uladaha dabiciga ka yimaadda waxa ay nafta u keentaa laba ubood oo kale: aqoonta xidhiidhka wax kasta, iyo ogaanshaha in wax kastaaba mid yihiin. Ulahaas naftu waxay ku dhamaystirtaa safarkeeda.
Ma aha rajo xumo in la eego dhalanteedka nolosha haddii loo sameeyo ujeedada fahamka khiyaanadeeda iyo dhaldhalaalka adduunka. Haddi waxaas oo dhan la arki lahaa uumiga iyo gudcurku waxay ahaan lahaayeen kuwo aan la dafiri karin runtii. Waxaa lama huraan ah in qofka runta raadinayo uu marka hore ku qanci waayo wax kasta oo aan dhab ahayn, waayo marka ay naftu garanayso waxa dhabta ah ee nolosha waa in ay kala saari kartaa waxa aan dhab ahayn.
Marka maskaxdu ay uuraysato oo ay gacanta ku hayaan ficilada dareenka, xajmiga ayaa la soo saaraa, farqiga nafsaddana waa la soo afjaray. Sidaas daraaddeed waxaa kici doona quudhsasho iyo xanaaq badan, iyo cadho, iyo cay, iyo xanaaq, iyo iskala qaybqaybin, iyo hunguri xumaan, iyo jilbisyada, iyo xawaashka iyo cadarkaba.
Nolosha caadiga ah ee bani'aadamka waa taxadar taxane ah oo laga bilaabo da 'yar ilaa da' wayn. Xoog kasta oo ka mid ah ilxidhka glamorka ayaa la dillaacay oo la rifey. Waqti xaadirka ah runta ayaa la arkaa. Laakiin looma dulqaadan karo. Dabeecaddu mar kale way xirantay. Waana wax cajiib ah, naxdintaasina waa isla waqti isku mid ah oo lagu dhuftay xanaaq iyo farxad kuwaas oo soo saara. Dhimashadu waxay sii socotaa wakhti ay socoto wakhti wakhti ah, iyada oo la geeyo halkan, halkaasoo lagu soo rogay foorno feker ah, laga gooyo dhagaxyada musuqmaasuqa ama ku boodboodo murugo iyo quusasho, si ay u kiciso oo ay ugu soo baxdo dhimashada foosha Baddana waa tan biyaha dhulka ka baxa oo dhan, kuwa aan waxba galabsan. Sidaas daraadeed naftu waa daalan tahay nolosheeda.
Jidhka maalmaha hore waxaa la aqbalay sida soo bandhigaha qarsoodiga ah ee dunidan u qurux badan. Nolosha noloshu waxay ahayd inay fahamto oo ay fahamto wax kasta oo muujinaysa: si ay u faafiyaan farriinta faraska ee miyir-beelka: in la sameeyo shaqada hadda, si ay naftu u sii socoto safarkeeda. Iyada oo aqoonkani yahay niyadda ayaa leh miyir-beelka iyo nabadda iyadoo ay ku jiraan duni caga-jug ah.